Amnesty International oo soo bandhigtay Tiradda xukunadda dilalka ee sannadkii hore laga fuliyey Somalia. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Hay’adda u dooda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa soo saartay Warbixin-sannadeedka la xiriira xukunadda dilalka ee Caalamka laga fuliyey sannadkii hore ee 2015-ka.
Amnesty international waxay sheegtay in tiradda xukunadda dilalka ee Caalamka sii korodhay, iyadoo sannadkii hore gaartay meesha ugu sarreysay tan iyo sannadkii 1989-kii.
Amnesty international waxay xustay in ugu yaraan 1,634 qof lagu fuliyey xukuno dil ah sannadkii hore, taasi oo muujinaysa sara-kaca in ka badan 50% marka loo eego sannadkii ka horreeyey.
Warbixinta waxaa lagu muujiyey in 89% xukunadaasi laga fuliyey dalalka Iran, Pakistan iyo Sacuudiga, iyadoo dalka Shiinaha oo Kumanaan qof lagu dilo, haddana Dowladda Shiinaha waxay aad u dhowrtaa Sirta xukunadda dilka.
Shaxda Amnesty International waxaa lagu xusay in Iran lagu dilay 97 qof, Pakistan 326 qof, Sacuudiga 158, Maraykanka, 28 qof, Iraq 26 qof, Masar 22 qof, Indonesia 14 qof iyo Chad oo 10 qof lagu dilay sannadkii hore.
Warbixinta Amnesty International waxaa lagu sheegay in Somalia sannadkii hore Xukun dil ah lagu fuliyey 25 qof, waana tiro aad u yar marka loo eego xukunadda sannadihii ka horreeyey.
Si kastaba ha ahaatee, Xukuunadda dilalalka ee ay Maxkamadaha ridaan ka sokow waxaa jira dad badan oo ku geeriyooda qaraxyadda, is-rasaasaynta iyo dhaca hubeysan, kuwaasi oo aan haba yaraatee la diiwaan gelinin, lana soo qabanin kooxaaha ka dambeeya dilalka dadka rayidka ee Somalia.
Shakiyo cusub oo ka soo baxay dilkii Saxafiyad Talyaani iyo Sawir-qaadaheeda oo lagu dilay Muqdisho.